Eyona ilungileyo kwiZonum yeCAD / GIS-Geofumadas
Meyi, 2011 Iiphotography, Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo, Zobunjineli
Zonum Solutions yindawo ebonelela ngezixhobo eziphuhliswe ngumfundi kwiYunivesithi yaseArizona, othe ngexesha lakhe elongezelelekileyo wanikezela izihloko zekhowudi ezinxulumene nezixhobo zeCAD, imephu kunye nobunjineli, ngakumbi ngeefayile ze-kml. Mhlawumbi into eyenze yathandwa kukuba babenikwa simahla, kwaye nangona ezinye zazo ezazibaleka kwidesktop zinomhla wokuphelelwa, ezinye zibaleka kuphela kwiinguqulelo zangaphambili zeGoogle Earth, ezinye zisasebenza kwaye kunjalo, abo basebenza kwi-intanethi ngokupheleleyo iyafumaneka.
Apha ukubonisa isishwankathelo izicelo malunga 50 ziyafumaneka kwi Zonums.com, nangona ahlele ngake xaka ezithile, njengoko zisebenza ngaphezu kwesinye zezigaba ange ebuzinzisile kaloku, lilinge ukushwankathela konke kuloo ndawo.
Izixhobo zeGoogle Earth neGoogle Maps
Clivumba: Ikuvumela ukuba ubenomxholo kwiimephu zikaGoogle, ilizwe okanye indawo oyikhethileyo. Ungayichaza imibala ngokwahlula-hlula kwezolawulo, isentroid kunye nobungqongqo bomqolo uze unciphise i-kml ukuze uyivule kuGoogle Earth (kwi mode OpenGL). Kuninzi lweemvavanyo zam ndifumene ibug engatshintshi ukhetho lwelizwe laseMelika.
DigiPoint: Ngesi sixhobo, unokuzoba iimephu zikaGoogle, ungqimba lwamanqaku. Uhlobo lwembono lunokukhethwa, kunye nokuba sifuna ukujonga amanqaku kwi-lat / lon okanye kwi-UTM; Qwalasela kwakhona uhlobo lwe icon, umbala, igama lendawo kwaye ukuba siyayifuna kwi-2D okanye kwi-3D. Emva koko ifayile inokuthunyelwa ngaphandle kwi-kml, csv, kml, gpx, dxf, txt, bln okanye tab.
I-E-Query: Khipha izilungiso eziphakamileyo kwisiseko seGoogle Earth. Ukwenza oku, ukuba sinoluhlu lokudibanisa, nokuba nge-lat / lon okanye kwi-UTM, singena ngokungenisa ifayile okanye ngekopi / uncamathisele. Emva koko sichaza uhlobo lwesahluli (ikoma, isithuba, indawo), kwaye xa ucinezela iqhosha lokukhangela ukuphakama, inkqubo iya kwisiseko seGoogle Earth kwaye ifumane ulungelelwaniso olufanelekileyo z. Emva koko unokukhuphela ifayile kwifom ye-gpx, csv, txt okanye kwifomathi.
Isixhobo esikhulu, esinokuba luncedo ukudala imodeli yomhlaba ngokusekelwe kwiindawo eziphakamileyo zeGoogle Earth, kubala ukuphakama komzila apho sino-xy ukulungelelanisa okanye ukuguqula naluphi na uhla lwe-2D kwi-3D.
GpxViewer: Esi sisixhobo esisebenzayo esibonisa ifayile ethathwe ngeGPS kwifomathi yeGPX kwiiMephu zikaGoogle.
EXT2GEEsi sixhobo sisebenza kwinqanaba ledesktop, kwaye siguqula uququzelelo ukusuka kwifayile ye-Excel ukuya kwi-kml enokufundwa nguGoogle Earth. Enye yezona zinto zixabisekileyo kwesi sicelo kukuba ikuvumela ukuba ukhethe uluhlu lweeseli, indlela ezifumaneka ngayo izilungelelaniso, yamkela ukuba zikwindawo (idesimali) okanye i-UTM kunye nesimboli. Ewe kunjalo, idatha kufuneka ibe kwi-WGS84, kuba yeyona isetyenziswa nguGoogle Earth. Ngelixa le app ingasafumaneki, ungayisebenzisa Ithempulethi yeGeofumadas odala i-kml ukusuka kwii-UTM izilungiso.
I-GE-Census Explorer: Esi sixhobo sibambelela kwiziko ledatha laseMelika laseMelika kwaye lenze kube lula ukwenza ii-2 kunye ne-3 dimensional thematic layers. Isebenza kuphela kunye nale database, kodwa ngumzekelo onokuthi umntu onolwazi lwekhowudi asebenzise ukunamathela kolunye ugcino lwedatha kwi-Intanethi.
GE-Extent: Oku kunxulunyaniswa nesiqhelo esithi, ngokudibanisa idilesi ye-PHP kwi-kml, ubambe ubungakanani oboniswe kwiGoogle Earth kwaye uyibuyise njengenkcukacha. Inokuba luncedo kakhulu, njengokudibanisa Iziqu okanye xa siza kubamba izikrini ke ngoko malunga nokulungelelaniswa kweekona; kufana noko kuyenza I-GPS visualizer.
GE-UTM: Esi sixhobo siyafana nesangaphambili, kokubini ekusebenzeni nasekwakhiweni. Ngumahluko ophakanyisayo kukudityaniswa kwe-UTM yendawo ethile.
ImephuTool: Le isethi yezixhobo ezigxilwe kumbukeli we-intanethi ovumela ukhenketho ukuba ukhethe uhlobo lokubonakalisa olubandakanya "ukunqumla" kwindlela onokuya kuyo kwindawo ethile ye-UTM okanye indawo yommandla.
Phakathi kwezi zikhetho ezikhoyo zibonakaliswa kwedatha / ye-lon idatha kwi-degrees, imizuzu kunye nemizuzwana kunye ne-decimals kunye ne-UTM.
Unokubala kunye neeyunithi ezahlukeneyo zomgama kumgca othe ngqo, kwi-polyline nakwindawo ye-polygon. Ikwabala indlela phakathi kweendlela ezimbini kwaye ibonakalise ukuphakama kwendawo ethile kwiimitha nasezinyaweni.
Ukuguquka kweefayile kml kwezinye iifom.
Ezi zixhobo zine ezikhululekileyo ezikuvumela ukuba uguqule iifayile ze-kml kwi-dxf, shp, txt, csv, tab kunye gpx. Le yokugqibela isebenza kwi-Intanethi.
Kml2CAD (kml ukuya kwi dxf)
Ezinye izixhobo okanye ezingapheliyo zisebenza ngeenguqulelo zangaphambili zeGoogle Earth
Oku kulandelayo, musa ukuqhuba ngeenguqulelo zakutshanje zeGoogle Earth, kodwa sithetha ngabo ngobuchule babo, ukuba umntu ufuna ukuwasebenzisa kwiinguqulelo ezihambelanayo okanye nje ukuvelisa iingcamango zomntu osebenza kwisixhobo esifanayo.
GESEsi ayisisixhobo, kodwa ngumzobo osibonisa zonke iisimboli ezisetyenziswa nguGoogle Earth, kunye nenani lazo. Ilungele ukwenza ngokwezifiso iifayile ze-kml ngaphandle kokuzabalaza ukuba yeyiphi isazisi kunye nomfanekiso abanazo.
GE-Symbols: Le ikhangeleka ngathi yeyangaphambili, umahluko osebenza kuyo kwi-Intanethi, kwaye xa ucinezela iqhosha benza iskripthi esibonisa ikhowudi. Mva nje ndiyibonile le ndlela iphantsi.
Mapplets: Ezi ziinkcazo kwi-xml yekhowudi enokusetyenziswa kwimiba efana nokubonisa ulungelelwaniso oluthile okanye ukungena ngababini kwiiMephu zikaGoogle. Ukuziqhelanisa andikhange ndikwazi ukwenza ezo mapplets zibonise ngokufaka i-url kwiiMaphu zikaGoogle.
ZMaps: Le yingqokelela yamakhonkco kwizixhobo ezahlukeneyo zeZonum. Phantse ezifanayo zishwankathelwe kweli candelo.
zGE-Toolbox: Olu yayiluseto olupheleleyo lwezixhobo ezakhiwe ngaphezulu kweGoogle Earth API, ngelishwa khange ihlaziywe kwi-DirectX yeenguqulelo zangoku. Nangona kunjalo kufanelekile ukwazi ukuba yenze izinto ezinje: ukuzoba isangqa, ukusika kwecandelo, ikopi / uncamathisela, ukuthumela ngaphandle kunye nezinye iindlela zokwenza idijithali ngqo kwiGoogle Earth.
Izixhobo zeefoto kunye neefayile zeCAD
Ezi zixazulula ezinye iinkqubo eziqhelekileyo zokuguqulwa kwedatha nokusebenzisana phakathi kweefayile ze-dxf kunye nezilungelelaniso.
IiCotrans: Ukuguqulwa kwezilungelo kumgca.
Ectrans: Ukuguqulwa kwezilungelelaniso ezivela kwiitheyibhile.
GVetz: Oku akuzange kwakhiwe.
Cad2xy: Ikhupha izakhiwo kwifayili ye-dxf.
EPoint2Cad: Kuthumela iikhomputha ze-Excel kwi-AutoCAD.
xy2CAD: Yakha i-dxf ukusuka kwi-xy i-coordinates, kwi-intanethi.
Izixhobo zeefayile zefayile
Ezi zilandelayo zixhobo eziguqula iifayile ze-shp kwiifom ezahlukeneyo, kubandakanya i-txt, i-dxf, i-gpx kunye ne-km. Uninzi lwazo lukuvumela ukuba uqwalasele uhlobo lweeyunithi kunye neempawu zefayile ekujoliswe kuyo, kufuneka ukuba ubuncinci iifayile ze- .shp, .shx kunye .dbf zikhona.
I-Shape2T, Shp2Cad, Shp2GPX, Shp2kml.
Kuzo be be thethile kanye, ubuncinci kwezo zinto ezihlobene neGoogle Earth, kodwa kukho ezinye ngokweloluhlu.
Epa2GIS: Imveliso evela kwi-Epanet ukuya kwiSpefile.
EpaElevations: Ukwabela ukuphakanyiswa kwiindawo zokunxibelelana.
EpaMove: Ngolu khetho, olusebenza kwi-Intanethi, inethiwekhi iyonke inokuhanjiswa ukusuka kwindawo yemvelaphi kunye ne-DeltaX / DeltaY. Zonke ezinye zibalwa ngokuzenzekelayo.
EpaRotate: Iyafana neyangaphambili, kodwa into eyenzayo kukujikeleza inethiwekhi. Ilungele iinkqubo ezingakhange ziboniswe georefere.
EpaSens: Oku kukubala kwenethiwekhi, ukukwazi ukudlala nobubanzi bombhobho kunye nokufuna ukuba ubone impembelelo yayo kwiindawo ezihlukeneyo.
EpaTable: Oku kwenza ingxelo yefayile ye-csv ngokubhekisele kwifayile ye-Epanet. Iinkcukacha inani lezivalo, iitanki, imibhobho, njl.
Excel2Epa: Olu lukhulu malunga ne-Excel VBA, ephuma ngaphandle ngaphandle kweefayile .epa
Gpx2epa: Ngale ndlela, ifayile efakwe ngeGPS kwifomethi ye-gpx ingaguqulelwa kwi-Epanet.
MSX-GUI: Omnye utshaya
Net2Epa: Le nxalenye yeso sixhobo esichazwe ngasentla, apho ungayiphawula amanqaku kwiGoogle Maps uze uyikhuphele kwifomathi ye-Epanet.
Zefanet: Esi sixhobo asikhulanga.
Epa2kmz: Guqula iifayile ze-Epanet kwiGoogle Earth.
Epanet Z: Oku kukuhle, kuvumela ukulayisha i-Google Amamephu, i-Yahoo okanye i-Bing yamaphepha e-Epanet.
EpaGeo: Oku kuvumela ukuguqulwa kwiifayile zeEpanet kwimimandla efana neyunithi kunye nokucwangcisa inkqubo.
Shp2epa: Guqula iifayile ze-shp ku-Epanet.
Ezi zincedo ekuvelweni kwe-hydrological phantsi kwamanqanaba aseUnited States kunye nokuguqulwa kweyunithi.
Inani leKharve: Oku kusombulula naziphi na izinto eziguquguqukayo kwisilinganisi esisetyenziselwa ukubala i-SCS.
LNP3: Sombulula ubukhulu bepotayiti x ekugqithisweni kwe-Logarithm yemvelo.
PChartz: Igrafu yengqondo ebalala ukuhluka kweqondo lokushisa, umswakama obunxulumene kunye nezinye izityalo nazo zitshiza.
Ucons: Esi sisixhobo esihle kakhulu kubafundi babaNjineli. Iguqula iiyunithi ezahlukeneyo kubandakanya ubunzima, uxinzelelo, ixesha, ubushushu, amandla, njl.
Zucons: Esi sixhobo esisodwa ngasentla, kodwa sisebenza kwi-intanethi.
Ngokuqinisekileyo ngumsebenzi omkhulu, ukuba simahla. Ngelixa ezinye zingekhoyo ngoku, kufanelekile buyisela iincenti ezimbalwa ngo mbulelo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuqhawula kuthenga i-Ashtech; Yintoni esinokuyilindela
Post Next FastCAD, i-AutoCAD ShadowOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 ziye kwezona Zona zibalaseleyo ze-CAD / GIS
Ndingathanda ukwazi ukuba kukho nayiphi na i-scrit yokudala ngokuzenzekelayo i-meridians kunye ne-Autocad
Ukubulisa, ungandixelela ukuba loluphi uhlobo lweekhonkco ezisetyenziswa yi-EPANET? Ziyi-X, Y, kodwa yeyiphi: i-UTM, i-geographic-decimal, iCartesian, yona. ENKOSI…